Baal Dahab waa Gole Bulshadu ku Xiriirto oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay u sameeyeen bulsho weynta Somaaliyeed. Adeegga oo ay leedahay shirkadda AMS, waxaa loo naqshadeeyey, loona dhisay dad af Soomaaliga ku hadla oo ku kala nool Soomaaliya, Geeska Afrikada kale, Bariga Afrika iyo Qurbaha. Waa markii ugu horreysay ee la sameeyo gole bulshadu ku xiriirto oo si gaar loogu talogalay in Bulshada Soomaaliyeed ay ku xiriiraan afkooda hooyo ee Soomaaliga iyo afka ingiriiskaba.
Baal Dahab wuxuu adeegsadayaashiisa siinayaa fursad ay isku diiwaangeliyaan, xogkoob (Profile) ku sameystaan oo ay adeegsadayaal kale kula saaxiibaan, farriimaha isku dhaafsadaan, oo ay ku gudbiyaan wixii markaas cusub (farriin qoraal ah, sawirro, fiidyow iwm), kuna diraan summadaha iyo dareen muujinta, ayna si toos ah ama cod duuban ugu wada xiriiraan iwm. Waxaa intaas dheer, in adeegsadayaashu ay samaysan karaan, ku biiri karaan karaan gole kooxeedyo, ama agaasimi karaan munaasabado iyo bogag madadaalo oo ay wada danaynayaan.
Intaas oo dhan marka laga soo tago, golaha Baal Dahab wuxuu leeyahay qaab-dhismeed u gooni ah oo loo yaqaan ‘Waabteyda Dahabka ah’ taas oo adeegsadayaasha u ogolaanaysa kaydinta ‘waxyaabaha Dahabka u ah’ ee noloshooda la xiriira sida saaxiibbada dahabka ah, xusuusaha dahabka ah, heesaha dahabka ah, Xaaladaha Dahabka ah iwm. Adeegaani wuxuu soo af-jarayaa xilliyadii ay luqaddu dad badan oo afka Soomaaliga ku hadla ka hor istaagi jirtay inay internetka adeegsadaan, wuxuuna adeeggu dadkaas u noqonayaa waa cusub oo u baryay iyadoo aysan jiri doonin caqabado xagga luqadda ah oo ka hor istaagi doona adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu ay ku xiriirto.
Follow us for more awesome updates
Xaquuqda waxaa ay u dhawran tahay Baal Dahab © 2019
Xeerka lacag bixinta
Xeerka lacag celinta